Israaiil oo duqeyn ka geysatay Masar, Madaxweynaha Masar oo raali ka ah!(ceeb aduun) – Xeernews24
Israaiil oo duqeyn ka geysatay Masar, Madaxweynaha Masar oo raali ka ah!(ceeb aduun)
Wargeyska New York Times ayaa soo daabacay war dadka oo dhan ka yaabiyay, balse la filayay marka laga hadlayo xidhiidhka sii kordhaya ee u dhaxeeya Israa’iil iyo dalalka Carabta.
Duqeymaha oo socday muddo labo sanno ayaa Israa’iil waxa ay gobolka Sinai iyo meelo kale oo Masar ka mid ah ka geysatay wax ka badan 100 duqeymo cirka ah, iyada oo la isticmaalayo diyaaradaha aan duuliyeyaasha lahayn.
Hadda micnaha wuxuu yahay in militariga Masar oo muddo la tacaalayay kooxaha kacdoonka ee Sinai in ay garab weydiisteen Israa’iil. Taas oo la sheegay in labada dal ay ka faa’iideysanayaan. Israaiil ayuu ujeedkeedu yahay in ay amni ka dhigto xuduudda ay la wadaagto Masar, sidoo kalane ay cadawgeeda ku ugaadhsato meelo kale.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/02/Al-Sisi.jpg 156 322 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-02-06 16:52:152018-02-06 16:52:15Israaiil oo duqeyn ka geysatay Masar, Madaxweynaha Masar oo raali ka ah!(ceeb aduun)
XOG: Kheyre oo Markii ugu horeysay u safraya Imaaraadka Carabta & Sababta... Wasaaradda Boostada & Isgaadhsiinta oo qabanqaabineysa shirweynaha Isgaadhsiinta...